कस्तो खानेकुरा गर्मीमा सही हुदैन ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
सडक किनारमा खुला राखिएका ति खानेकुरामा झिँगा बस्ने, धुलो लाग्ने हुन्छ । अर्कोतिर फुटपाथमा सरसफाई गर्ने अनुकुलता हुँदैन ।फोहोर हातले पटक–पटक बनाएको चटपटे, पानीपुरी सेवन गर्दा पेट गडबडी हुन्छ । यस्ता खानेकुरा शरीरले सजिलै पचाउन सक्दैन ।
वास्तवमा प्यास मेटाउनका लागि पिइने यस्ता पेयले शरीरलाई निकै नोक्सान पुर्‍याउने विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । फ्रिजमा राखिएको चिसो पानी पनि स्वास्थ्यमैत्री मानिदैन । सामान्य एवं प्राकृतिक रुपमा चिस्याएको पानी, सर्वत वा ताजा फलफूलको जुस भने उपयोगी हुन्छ ।
गर्मी मौसममा के खाने स्वस्थ रहन जान्नै पर्ने कुराहरु
यस गर्मि मौसममा आफूलाई ताजा र स्वास्थ्य राख्नका लागि धेरै प्रकारका जुस र चिसो पेय पदार्थको सेवन गरिन्छ । यस्तोमा तपाई बेलको जुस पिउन सक्नुहुन्छ, तपाईको शरीरलाई अचुक फाइदा मिल्छ । बेलले स्वास्थ्यका साथै सौन्दर्यलाई निखारर्ने पनि काम गर्छ । आयुर्वेदमा बेललाई गुणको खानी बताएइन्छ । बेलबाट पाइने प्रोटिन, बिटा–क्यारोटिन, थायमिन, राइबोफ्लेभिन र भिटामिन सी निक्कै गुणकारी हुन्छ ।
जान्नुहोस् यसको फाइदाहरु
Don't Miss it कोकाकोला खाएको १ घण्टापछि तपाईको शरीरमा के–के हुन्छ ? रोचक जानकारी
Up Next सास गनाउँने कारण एउटा जिब्रोमा फोहोर हुँदा पनि हाे, जिब्रो सफा राख्न अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय